Best USB Iweghachite Software ịrụ USB Iweghachite
Common USB data ọnwụ ndapụta
Ngwọta maka USB mgbake
Video nkuzi nke USB faịlụ mgbake
Na-faịlụ n'ezie ehichapụ USB flash mbanye mgbe na-eme?
Kwụsị iji USB mbanye tupu mgbake
1 Common USB data ọnwụ ndapụta
1. ezighị ma ọ bụ carelessly ihichapụ faịlụ site USB flash mbanye na pụghị ịhụ ha na egweri biini ma ọ bụ ahịhịa biini.
2. Ida faịlụ mgbe ebufe ha si USB flash mbanye na ngwaọrụ ndị ọzọ n'ihi na-amaghị ihe kpatara.
3. Echefu ịkwụpụ USB flash mbanye mgbe kọmputa mechisịrị ọnụ ala na ụfọdụ faịlụ na-ehichapụ.
4. USB flash mbanye enwe virus ma ọ bụ malware agha na faịlụ na-zoro ezo ma ọ bụ ehichapụ.
5. USB flash mbanye faịlụ aghọ keerughi ruru ka amaghị ihe.
2 Ngwọta n'ihi USB mgbake
Ọ bụ ihe amamihe na-USB mgbake ngwá ọrụ iji naghachi data si USB, dị ka nke a bụ ndị kasị dị irè na kpọmkwem usoro. E nwere nza nke USB data mgbake ngwaọrụ, ị dị nnọọ mkpa iji nweta a ziri ezi onye na kasị mma na dabara gị mkpa. N'ozuzu pụrụ ịdabere kwesịrị ịbụ kasị mkpa, na-mgbake ọsọ, mfe na--use, na asọmpi price nwekwara ụfọdụ dị mkpa ihe na ị ga-atụle.
Ezi USB data mgbake software nwere ike inye preview ikike n'ihi na ị na inwale mgbake N'ihi tupu ị na-azụ ya.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows ọrụ usoro, i nwere ike a na-agbalị Wondershare Data Recovery. Ọ bụ otú ahụ Windows USB mgbake software nke pụrụ inyere gị naghachi faịlụ site USB furu efu ruru ka ihichapụ, formatting, virus ọrịa, na ihe ndị ọzọ. I nwekwara ike ime USB flash mbanye mgbake site n'enyemaka nke a mgbake ọrụ ụlọ ọrụ, ma ndị na-eri bụ nnọọ elu. E nwekwara a Mac version maka Mac ọrụ: Wondershare Data Recovery for Mac (maka Mavericks ugbu a).
Download free ikpe version n'okpuru ugbu a.
Wụnye na-agba ọsọ ahụ Data Recovery na kọmputa gị (ewere Windows version dị ka ihe atụ). Nanị ole na ole clicks, ị nwere ike naghachi gị niile furu efu data gị USB mbanye na-enweghị àgwà ọnwụ.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị USB mbanye na kọmputa na ẹkedori omume na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Họrọ faịlụ ụdị na ị chọrọ iji naghachi.
Nzọụkwụ 3 Họrọ naghachi faịlụ site na gị USB mbanye (Mpụga mbughari ngwaọrụ).
Tupu scanning, ị nwere ike ịlele "Kwado Deep iṅomi", nke nwere ike inyere ịrụ a karị keukwu scanning furu efu faịlụ site na gị USB mbanye, dị ka furu efu ruru formatting. N'ezie, ị nwekwara ike ikwu na ọ ka iṅomi ma ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a, n'ihi na ọ jụrụ n'ihi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ oge.
Nzọụkwụ 4 Preview na-agbake faịlụ site na gị USB mbanye.
Mgbe n'ịrụ data mgbake, ị na-apụghị ịzọpụta ndị natara faịlụ na otu USB mbanye ọzọ. Ị nwere ike ịzọpụta ha na ndị ọzọ na mpụga ngwaọrụ ma ọ bụ na-azọpụta na kọmputa gị.
3 Video nkuzi nke USB faịlụ mgbake
4 Ndi faịlụ n'ezie ehichapụ USB flash mbanye mgbe na-eme?
Mgbe ị na-carelessly izute ụfọdụ n'ime ndị ndapụta ná ndụ kwa ụbọchị, ị na-ka nchegbu banyere na ndị na faịlụ na-ehichapụ si gị USB flash mbanye na-adịgide adịgide na e nweghị ụzọ naghachi data si USB? Ka a okwu nke eziokwu, adịkwa faịlụ site USB mbanye apụtaghị na ndị a faịlụ na-ruo mgbe ebighị ebi. I nwere oké Ohere ime USB mgbake ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na ezi flash mbanye mgbake software na adịghị eme ka ọ bụla ọrụ ndudue nke ga-belata USB mgbake ohere.
5 Kwụsị na iji USB mbanye tupu mgbake
Tupu n'ịrụ USB flash mbanye data mgbake, ihe unu kwesịrị ime apụ bụ iwelata data ọnwụ ma na-amụba ekwe omume nke ihe ịga nke ọma USB mgbake.
The ọzọ eme na-ewere ọnọdụ na gị USB mbanye, nke ukwuu ohere nke data overwriting ga-adị. Welie Ohere maka USB data mgbake, cheta ghara iji USB mbanye na-echekwa ọhụrụ faịlụ, ọ bụghị dezie ọ bụla akwụkwọ echekwara na ya, ma ọ bụ na-eji USB mbanye maka ihe ọ bụla ọzọ na-ebufe.
> Resource> Flash Drive> Olee otú iji naghachi faịlụ site USB na USB Iweghachite